AMBOHIMANAMBOLA : KAMIAONA ORINASA TRATRA NITATITRA RONGONY TAMIN’NY LASAKALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYAMBOHIMANAMBOLA : KAMIAONA ORINASA TRATRA NITATITRA RONGONY TAMIN’NY LASAKA
AMBOHIMANAMBOLA : KAMIAONA ORINASA TRATRA NITATITRA RONGONY TAMIN’NY LASAKA
Gony feno rongony no nisy nanipy avy tao anatina kamiao lehibe iray teny akaikin’ny “rond-point” Ambohimanambola, ny sabotsy antoandro teo. Nanaitra ireo mponina teny amin’ny manodidina izany ka nisy tamin’ireto farany no nanatona nizaha ny zava-nisy. Nirifatra nitsoaka kosa anefa ireo roalahy izay efa niatrana nivonona ny handray ireo “entana”.
“Teo izahay no niahiahy ary tsy sahy nikasika ireo gony fa niantso mpitandro ny filaminana avy hatrany”, araka ny fitantaran’ny vavolombelona ny tranga.
Nanao bemidina teny an-toerana ny Polisy avy ao Alasora ary nizaha ny zava-nisy. Nosokafana ireo gony tsara fatotra ka rongony nafatratra no hita tao. Nozaraina tamina lasaka maro izany, araka ny fitantaran’ny loharanom-baovao, saingy rehefa natambatra dia nahatratra roa gony sy tapany.
Olona nilaza ho nahita ny tranga sisa no tratran’ireo Polisy teny an-toerana satria tsy hita izay nalehan’ireo roalahy voalaza fa niandry ny figadonan’ireo entana. Andian’olona nitono-tena ho vavolombelona no hany nitantara ny antsipirihany sy ny momba ilay kamiao nitatitra ireo rongony tamin’ny mpitandro ny filaminana.
“Orinasa tsy miankina lehibe eto Antananarivo no voalazan’ireo nanatri-maso fa nitondra ireo lasaka feno rongony ireo. Eo am-pikarohana ilay fiarakodia sy ireo roalahy hitan’ny olona teny amin’ny manodidina izahay ankehitriny”, araka ny fanazavan’ny Polisy.
Partager la publication "AMBOHIMANAMBOLA : KAMIAONA ORINASA TRATRA NITATITRA RONGONY TAMIN’NY LASAKA"
How to make money with CPA Autopilot 24/11/2018 at 04:09 Repondre
Erotik nebena 25/11/2018 at 20:50 Repondre
Santiago Shapley 01/01/2019 at 14:04 Repondre
Gino Toti 08/01/2019 at 16:29 Repondre
ganhar seguidores no instagram 12/01/2019 at 22:05 Repondre
IlluminatiProducers 13/01/2019 at 10:10 Repondre
Nathan 14/01/2019 at 17:34 Repondre
gnorimies 19/01/2019 at 20:16 Repondre
jumpsuit 23/01/2019 at 15:06 Repondre